कर्णाली योजना आयोग उपाध्यक्षमा रेग्मी - Everest Dainik - News from Nepal
कर्णाली योजना आयोग उपाध्यक्षमा रेग्मी
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी नियुक्त भएका छन् ।
लामो समय योजना तथा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील रेग्मीलाई प्रदेश सरकारले उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन् ।
आयोगको सदस्यमा योगेन्द्र शाही र डा. दीपेन्द्र रोकाय नियुक्त भएका छन् । जनतासमाचारबाट
याे पनि पढ्नुस सुरु भयो पेट्रोलियम अन्वेषण कार्यक्रम